ရိန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
(1982-06-25) ဇွန် ၂၅၊ ၁၉၈၂ (အသက် ၃၉)
၁၉၉၈ မှ ယနေ့ထိ
JYP Entertainment (2002–07)
J. Tune Entertainment (2007–13)
William Morris Endeavor (2009–2010)
Cube Entertainment (2013–present)
FanClub (boy band) (1998-2000), MBLAQ
Official Website Official Twitter Account
ကိုရီးယားမင်းသား/အဆိုတော် ရိန်း သည် အာရှတိုက်ကိုကျော်ဖြတ်၍ ကမ္ဘာကိုလွှမ်းမည့် အနုပညာရှင်အဖြစ် သုံးသပ်ခြင်းခံရသူဖြစ်သည်။
သူ၏ အမည်ရင်းမှာ ဂျန်ဂျင်ဟွန်း ဖြစ်သည်။ မွေးနေ့မှာ ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၂၅)ရက်နေ့ ဖြစ်သည်။ သူ၏ မူလ အနုပညာအမည်မှာ Bi ဖြစ်သည်။ Bi ဟူသည့် ကိုရီးယားအမည်သည် မိုးဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည့်အတွက် နောက်ပိုင်းတွင် Rain ဟူသည့်အမည်ကို တွဲဖက်သုံးစွဲခဲ့သည်။ ရိန်းသည် Kyung Hee University ကျောင်းမှ ပို့စ်မော်ဒန်မြူးဇစ် ဘာသာဖြင့် ဘွဲ့ရခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
သူ၏ အနုပညာခရီးလမ်းအစသည် အခြားကိုရီးယား သရုပ်ဆောင် အဆိုတော်များထက် ကြမ်းတမ်းခဲ့လေသည်။ သူသည် အဆိုတော် ပတ်ဂျီယွန်း ၏ ဖျော်ဖြေပွဲများတွင် နောက်ခံ အကအဖွဲ့သားတစ်ယောက်အနေဖြင့် ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူ၏ အနုပညာအစွမ်းအစကို ပတ်နှင့် သူ၏ အေဂျင်စီ JYP Entertainment တို့က ရိပ်စားမိခဲ့သဖြင့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ၎င်းတို့၏ ကူညီစောင်မမှုများဖြင့် Bad Guy အမည်ရှိ သူ၏ တစ်ကိုယ်တော် တေးအယ်လ်ဘမ်ကို ဖြန့်ချိနိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းအယ်လ်ဘမ်ဖြင့်ပင် နာမည်ရခဲ့ပြီး ကိုရီးယားပြည်တွင်းက ချီးမြှင့်သော ဆုပေးပွဲများတွင် တက်သစ်စအဆိုရှင်ဆုကို အမြောက်အများပင် လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ထိုအယ်လ်ဘမ်ထဲမှ Bad Guy နှင့် Besides Saying Goodbye သီချင်းများသည် ပရိသတ်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းများ ဖြစ်ခဲ့သည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် သူ၏ ပထမဦးဆုံး သရုပ်ဆောင်လုပ်သည့် ဇာတ်လမ်းတွဲအဖြစ် KBS ရုပ်သံကုမ္ပဏီမှ စီစဉ်ရိုက်ကူးသည့် Sang Doo, Let’s Go To School! ဇာတ်လမ်းတွဲတွင် ခေါင်းဆောင်နေရာမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်သူများမှာ မင်းသမီး Gong Hyo-Jin နှင့် မင်းသား လီဒေါင်ဂန်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုဇာတ်ကားဖြင့် ရိန်းသည် အကောင်းဆုံးမင်းသားသစ်ဆုနှင့် အလိုက်ဖက်ဆုံး စုံတွဲဆုများကို ရရှိခဲ့သည်။
ပရိသတ်အားပေးမှု ပိုမိုများပြားလာပြီးနောက် ရိန်းသည် ဒုတိယမြောက်အယ်လ်ဘမ် Rain#2 ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုအယ်လ်ဘမ်ထဲမှ Running Away from the Sun သီချင်းကို မိန်းကလေးပရိသတ်များ အသည်းစွဲကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။ ရိန်းကို အောင်မြင်သထက်အောင်မြင်ပြီး ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာပါ အောင်မြင်မှုရရှိစေခဲ့သည်ကတော့ Full House ဆိုသည့် ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်သည်။ ထိုဇာတ်လမ်းတွဲကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ မေလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ရိုက်ကူးခဲဲ့ပြီး ရိန်းနှင့်တွဲဖက်၍ မင်းသမီး ဆောင်းဟေဂို (Song Hye Gyo) (အွန်စော) ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလမှာပင် တတိယမြောက်အယ်လ်ဘမ်သစ်အတွက် ပရိုမိုးရှင်းလုပ်သည့် ဖျော်ဖြေပွဲများကို ကိုရီးယား၊ ဂျပန်နှင့် တရုတ်ပြည်တို့ထိ ခရီးဆန့် ကျင်းပခဲ့သည်။ သူ၏ တတိယမြောက် အယ်လ်ဘမ်သစ် It’s Raining ထွက်ရှိသည့်အချိန်နှင့် Full House ဇာတ်ကားပြသသည့်အချိန်မှာ တိုက်ဆိုင်နေသည့်အတွက် သူ၏အောင်မြင်မှုကို အရှိန်နှစ်ဆမြှင့်ပေးသလို ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် သူ၏ အောင်မြင်မှုများသည် အာရှကို လွှမ်းမိုးသွားလေသည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ် တစ်နှစ်လုံးမှာလည်း Full House ဇာတ်ကားအတွက် အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပွဲများကို နိုင်ငံတကာလှည့် သွားလာခဲ့သလို အာရှတိုက်ရှိ မြို့ကြီးများတွင် သူ၏ ဖျော်ဖြေပွဲများကို ပြုလုပ်ခဲ့ရာမှာလည်း အောင်မြင်မှုများစွာ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာတော့ Cruel Love ဆိုသည့် ဇာတ်လမ်းတွဲကို ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ထိုဇာတ်ကားတွင် ရှေ့မှ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သော ဇာတ်ကားနှစ်ကားနှင့်မတူ ခြားနားသည့် ဇာတ်ရုပ်ဖြင့် လက်ဝှေ့သမားသဏ္ဌာန် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူနှင့်အတူ မင်းသမီး ရှင်မင်အ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ရိန်းသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်အတွက် အာရှတိုက်မှာ အကျော်ကြားဆုံး ကိုရီးယားအနုပညာရှင်များအကြောင်းကို တင်ဆက်သည့်နေရာတွင် အဆိုတော် BoA, မင်းသား ဘေယောင်ဂျွန်းတို့နှင့်အတူ ဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ယခု ရိန်းသည် hollywood ရုပ်ရှင်လောကတည်းကို ဝင်တိုးနေပါသည်။ speed racer ရုပ်ရှင်ကားကို နာမည်ကျော် Matrix ကားရဲ့ ဒါရိုက်တာဖြစ်သော ဝါချောင်းစကီး ညီအကို နှင့်ရိုက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နောက်ထပ် Ninja Assassin ကားကိုလဲ ထပ်ရိုက်ခဲ့သည်။
↑ Mark Russell (29 April 2014)။ K-Pop Now!: The Korean Music Revolution။ Tuttle Publishing။ p. 118။ ISBN 978-1-4629-1411-1။
↑ 비, 16세 당시 팬클럽 활동 과거사진 공개 ‘말라깽이였네’Rain, released the picture when he was in 'Fan Club' (in Korean)။ Isplus (2011-11-12)။ 2014-02-05 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရိန်း&oldid=499493" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၀၆:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။